सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै यसमा अपनाउनुपर्ने संयमता र शिष्टाचारका बारे चर्चा हुनथालेको छ । कतै केही भई हाल्यो सूचना दिने–लिने, सुख–दुःख बाँड्ने माध्यम भएको छ, सामाजिक सञ्जाल । आधुनिक समाजको प्रतिविम्ब हो सामाजिक सञ्जाल । अहिले के बृद्ध, के बालक, के युवा सबै सामाजिक सञ्जालमा जोडिएका छन् तर यसको प्रयोग के कसरी गर्ने, के राख्न हुने के नराख्न हुने भन्ने कुराको विज्ञता वा समझ भने त्यति देखिँदैन । समाजमा आफूभन्दा साना तथा ठूलासँगको कुराकानी, व्यवहार, चालचलन, मित्रवत सम्बन्ध व्यक्ति विशेष फरक–फरक शिष्टता राख्ने चलन छ । समाजमा स्थापित शिष्टाचार पालना नगर्नेलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि अलग छ । सामाजिक सञ्जालको विकासले सामाजिक सम्बन्ध र अन्तक्र्रिया अनलाइन भइसकेको अवस्थामा त्यस्ता सञ्जालमा पनि सामाजिक शिष्टतालाई अपनाउनु आवश्यक भइसकेको छ तर सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक शिष्टाचार अलिक फरक रूपले परिभाषित हुँदैछ ।
त्यसैले अहिले सामाजिक सञ्जालको बढेको लोकप्रियता र प्रयोगसँगै यसमा अपनाउनुपर्ने संयमता र शिष्टताको बारेमा पनि चर्चा हुनथालेको छ ।
अझ भनौँ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नेपाली समाजका पलपलका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय घटना होस् वा व्यक्तिगत घटना एक निमेषमै अनलाइन भइरहेका छन् तर यी घटना सबै सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्न आवश्यक छन् वा छैनन् ? यसतर्फ कसैले हेक्का राख्ने गरेको देखिँदैन । कुनै घटनामा क्रिया प्रतिक्रिया जनाउनु र व्यक्तिगत घटना, फोटो, भिडियो जथाभावी रूपमा सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गर्दा समाजमा यसले कस्तो असर पार्ला ? यतातिर पनि एकपटक सोच्ने कि ।
हालका दिनमा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने किसिमका कार्य भए गरेको देखिन आएको हुँदा उल्लेखित कार्य कानुनले दण्डनीय कार्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यस्ता कार्य गर्ने र गर्न लगाउने व्यक्तिलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ बमोजिम एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । साथै कुनै जात, धर्म वा वर्ग विशेषलाई बिझ्ने गरी प्रयोग गरिने यस्ता व्यक्तिगत अधिकारको दुरूपयोगमा बन्देज लगाउन सकिए असाध्यै राम्रो हुने थियो । अझ बेला मौकामा छिमेकी देशविरुद्ध प्रयोग गरिने शब्दावली यति निकृष्ट हुने गरेका छन् कि कुरै नगरौँ ।
फेसबुक सार्वजनिक स्थान हो । सार्वजनिक ठाउँमा धूमपान, मद्यपान निषेध छ भन्ने सबैलाई थाह छ । तसर्थ, फेसबुकमा पनि अरूलाई हानि गर्ने अस्वस्थ कार्य गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा सबैले सचेत हुनु जरुरी छ । सामाजिक सञ्जाल बृहत् सार्वजनिक स्थल हो, जहाँ एक देशका मात्र होइन विश्वभरका मानिसको सञ्जाल हो, त्यसैले तपाईंले गर्ने क्रिया, प्रतिक्रिया केवल एक समुदाय वा राष्ट्रको सीमामात्र सिमित हुँदैन । यहाँ त अन्य मानिसको रुचि, अरुचि तथा भाषा, शिष्टताका बारेमा अत्यन्तै संवेदनशील भएर चल्नुपर्ने हुन्छ ।
फेसबुक पोष्ट भएका केही स्टाटस तथा फोटोका बारेमा चर्चा गर्दा पेसाले पत्रकार भएकाले मेरा फेसबुके साथी धेरै जसो पत्रकार नै छन् । केही महिना अघिको कुरा हो– एक जना होनाहार अग्रज पत्रकार मित्रले आफ्नो फेसबुकमा मान्छे जलाउँदै गरेको फोटा राखेर श्रद्धाञ्जलि दिनु भ्याउनुभयो । त्यति मात्र होइन उक्त फोटामा लाइक गर्ने सयभन्दा बढी देखिए । मानौँ यो एकदम सराहनीय कार्य हो, मानौँ उक्त कार्यले मृतआत्माले शान्ति पाउँछ । यस्ता घटनाको शृङ्खला नै छ, अर्का फेसबुके मित्र जो बस दुर्घटनाको दर्दनाक दृश्य आफ्नो फेसबुकमा अपलोड गर्छन्, मानौँ उनी कुनै ब्रेकिङ न्यूज च्यानल चलाउँछन् । सामाजिक सञ्जालमा अशिष्ट र अमर्यादित मात्र होइन, अश्लिल र फोहोरी शब्द र विम्बहरूको प्रयोगसमेत भइरहेको देखिन्छ । हाम्रो शिष्टता, भद्रता र सहिष्णुता किन खस्केको हो
यसरी ? हामी सामाजिक सञ्जालमार्फत समाजमा कस्तो संस्कृतिलाई हुर्काइरहेका
छौँ ? आमाचकारी गालीको रूपमा देखिनथालेका यस्ता अभिव्यक्तिले हाम्रो आफ्नै मर्यादालाई खस्काइरहेको छ । समाजिक सद्भाव र मर्यादा खल्बलाउने, वितृष्णा फैलाउने अशिष्ट व्यहोरा लेखेर पोष्ट गर्ने जो सुकै हुन्, चाहे ती राज्यका उच्च तह, ओहदा र सम्मान्नित व्यक्तित्वको सम्मानमा ठेस पु¥याउने दुरासयले निराधार एवं भ्रामक कुरा लेख्ने वा सही आसयले दिएका अभिवक्तिलाई गलत अर्थ लगाउने र प्रचार गर्ने नै किन नहुन् ती व्यक्तिहरू सामाजका लागि अपराधी हुन् ।
कोही कोहीले त सामाजिक सञ्जाल उनीहरूको व्यक्तिगत भवना पोख्ने स्थानका रूपमा प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरू आफ्ना प्रेमी वा प्रेमीकालाई फेसबुकमा धम्की दिइरहेका हुन्छन्, फकाइरहेका हुन्छन्, कसैलाई सम्झाइरहेका हुन्छन् । फेसबुक तपाईंको निजी जीवन देखाउने ठाउँ होइन । अझ कतिको त बिहान उठ्ने बित्तिकै गुडमर्निङ सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भई गुडनाइटमा अन्त्य हुन्छ । कही कतै बिहे, पार्टी वा सामाजिक कार्यक्रमा सहभागि हुँदा कोही कसैले फोटा खिच्न सक्छन् तर अर्काको फोटा उनीहरूको अनुमति बेगर राख्न सक्दैनन् । यहाँ त फोटा खिच्नेले सप्राइज दिन हो वा बेइजत गर्न हो, उक्त व्यक्तिलाई थाहै नदिई फोटो वा भिडियो खिचि सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिरहेका हुन्छन् । के यही हो त हाम्रो
शिष्टता ? हामीले आधुनिक सेवा सुविधा चलाउँदा सामाजिक मर्यादा, सामाजिक शिष्टतालाई ख्याल गरेनौँ भने सामाजिक सञ्जालमा मानिसको मोह घट्दै जानेछ । त्यसैले यसलाई सभ्य र सुसंस्कृत बनाऔँ । प्रविधि हाम्रा लागि जति महŒवपूर्ण छ, त्यति नै त्यसको प्रयोगमा सावधानी नअपनाउँदा घातक बन्दै गएका उदाहरण सार्वजनिक भइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल केका लागि प्रयोग गर्ने किन प्रयोग गर्ने कस्ता सूचना, जानकारी र फोटो पोष्ट गर्ने, कस्ता व्यक्तिलाई साथी बनाउने भन्ने बारेको ज्ञान सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामा हुनु आवश्यक देखिन्छ ।